Soomaaliya, 26 August 2019
Shir u furmay hanti-dhowrayaasha Soomaaliya
Mas’uuliyiinta hanti-dhowrka ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta uu shir uga furmo Muqdisho, waxaana la sheegay in ujeeddadan kulankan ay tahay xaqiijinta isla-xisaabtanka.
Xisbiga Waddani oo cambaareeyey hadalka taliye Taani
Mas’uul ka tirsan Xisbiga Waddani ee Somaliland ayaa ka jawaabay hadal uu shalay jeediyey Taliyaha Ciidanka Militariga Somaliland, waxaana uu mas’uulku hadalkaasi ku tilmaamay mid halis ku ah wadda jirka umadda.
Ciidamada dawladda, AMISOM oo qabsaday Buurweyn
Dib u dhac kale oo milatari ayaa soo waajahay maleeshiyada ururka Al-Shabab kadib markii ciidamo is-garabsanaya oo ka yimid Buulobarde ay maanta la wareegeen degaanka Buurweyn oo ay Al-Shabab canshuuraha ku qaadaan
Wareysi: Jeneraal Daahir Indhaqarshe
VOA waxaa u suurto gashay inay wareysi la yeelato taliyaha xilka kasii degaya ee ciidanka xoogga Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhoqarshe oo xilka laga qaaday iyadoo bilihii u dambeeyey ay ciidanku guulo ka keeneen dagaallo ka dhacay Shabeellada Hoose
Waxaa barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha soo jeedinaya Ibrahim Dandurey iyo Casha Cuud.
Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka, waxaa soo diyaarisay soona jeedineysa Sahra Ciidle Nur.
Barnamijka Madasha Dhalinyarada: Faduma Warya
Barnaamijka Madasha Dhalinyarada waxaa todobaadkaan marti noogu ah Faduma Waryaa oo ah gabar dhalinarada ah oo sawirro iyo muuqaalo ku saabsan Muqdisho kusoo bandhigto Baraha Bulshada.
Dad Itoobiyaan ah oo lagu dilay duleedka Hargeysa
Laba qof oo Ethiopian ah ayaa dhintay ka dib markii ay rag hubaysani shalay rasaas ku fureen gaadhi ay saaraayeen tahriibayaal u dhashay dalka Ethiopia, meel dibedda ka ah magaalada Hargeysa.
Ciidamada Gaalkacyo oo saldhig labaad loo dhisayo
Saldhig ay yeelanayaan ciidamada amniga Galmudug ayaa la sheegay in laga hirgalinayo duleedka Gaalkacayo si ay qayb uga noqoto adkaynta amniga.